Orinasa mpamatsy seza fiara, mpamatsy - Mpanamboatra kojakoja fipetrahana any China
Fanomezana ho an'ny mpampiasa tsara ho an'ny mpamatsy mpamokatra sinoa pu / volo vita amin'ny hoditra artifisialy ho an'ny fonon'ny seza fiara
Saron-tseza fiara no entana lehibe ampiasain'ny tompona fiara. Safidio ny ondana fiara milamina sy azo ampiharina arakaraka ny vanim-potoana dia zava-dehibe indrindra. Ankehitriny dia misy hoditra, hoditra superfiber, hoditra artifisialy, nylon, fibre simika, volon'ondry artifisialy, volon'ondry polyester ary fitaovana hafa amin'ny fonon'ny seza fiara
Sarony tsara sy sarony mora vidy
Rehefa mitete eo amin'ny fonon'ny seza hoditra ny fiara dia sasao amin'ny lamba famaohana taratasy mba hadio hatrany ny fonon'ny seza hoditra.
Fiarovan-tratra avo lenta avo indrindra amin'ny fiara
Ny fonon'ny seza fiara dia afaka miaro ny sezan'ny fiara amin'ny fahasimbana. Bensen dia manana rakotra seza fiara maro isan-karazany hisafidiananao azy, koa mifandraisa aminay izao!
Mpanome ondana fiara miloko madio avy amin'i China Factory
Ny fonony seza fiara dia ampahany manan-danja kokoa amin'ny atin'ny fiara, ny fonony seza fiaran-dalamby tsara dia hanatsara ny fahasambaran'ny tompony mandritra ny fizotran'ny fiara. Raha mila izany dia ampahafantaro anay ny maodely ary hanome anao antsipiriany bebe kokoa izahay.
Colour samy hafa Custom hoditra Auto Fiarovana Fiarovana fiara
Bensen dia mampiasa hoditra milamina amin'ny tontolo iainana hanaovana ondana vita amin'ny hoditra fiara, izay tsy hamoaka fofona manelingelina sy hiarovana ny fahasalamanao.
Fivarotana mafana feno karazana karazana fiara vita amin'ny hoditra amin'ny fiara
Ny famolavolana endrika mifanaraka amin'ny vatan'ny vatan'ny seza fiara dia afaka manamaivana ny havizanana vokatry ny fitondrana fiara.
Upholstery seza fiara fakan-tahaka amin'ny seza hoditra fiara
Amin'ny maha iray amin'ireo singa ilaina amin'ny atin'ny fiara, ny seza fiara dia manana anjara toerana lehibe amin'ny vokatry ny atin'ny fiara.
Cushion amin'ny seza fiara fitaterana maharitra maharitra
Miaraka amin'ny fitambarana loko manavao sy ny fomba maro karazana, ny seza fiara Bensen dia afaka mamaly ny ankamaroan'ny zavatra ilainao.
Car interior lamba fanoloana lamba vita amin'ny lamba landy fiara
Ny cushion an'ny fiara Bensen dia mampiasa hoditra PU vita amin'ny tontolo iainana, miaraka amin'ny lamba rongony landihazo faran'izay ratsy eropeana, ny fitrohana ny hamandoana ary mifoka rivotra, vanim-potoana efatra ny mari-pana tsy tapaka, manatsara ny fahasambaranao rehefa mitondra fiara.
Fihetsiketsehana avo lenta avo lenta avo indrindra ho an'ny fiara mandeha ho azy
Ny lozisialy fiara Bensen dia mandova teknika vita amin'ny hoditra vita amin'ny tanana vita amin'ny lamaody, ampiarahana amin'ny endrika lamaody kanto ankehitriny hanehoana endrika mihaja sy milamina.
Auto accessories Car Decoration Seza Cushion Universal
Ny hoditra ambany dia voaravaka endrika sy loaka, izay manatsara be ny fofonain'ny hoditra, ny fivoahan'ny rano sy ny rivotra, manohitra ny slip ary tsy mahazaka, ary miaina ny rivotra iainana tany am-boalohany, ny fanafanana ary ny asa hafa.